အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံ က ကိုဗစ် ဒုတိယလှိုင်း ကို ဘယ်လိုကာကွယ်နေလဲ? – Let Pan Daily
အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံ က ကိုဗစ် ဒုတိယလှိုင်း ကို ဘယ်လိုကာကွယ်နေလဲ?
Let Pan | September 17, 2020 | Local News | No Comments
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်းကူးစက်မှုက မေလနှောင်းပိုင်းကစပြီး မရှိသလောက် ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဇန်နဝါရီလကစပြီး ကိုဗစ် ၁၉ လူနာသစ်တွေ့ရှိတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံဟာ မေလဆန်းကစတင်ပြီး လူနာအရေအတွက် ၃၀၀၀ ကျော်ခဲ့တာာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက သြဂုတ်လလယ်အထိ အတည်ပြုလူနာ ၃၇၀ ကျော်သာ ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလလယ်မှာ ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်လူနာတွေ့ရှိမှုက ထိုင်းနိုင်ငံထက် ကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းအထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ ၃၈၉၄ ဦးရှိနေပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ၃၄၉၀ ဦး ရှိနေပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်းကူးစက်မှုက မေလ‌နှောင်းပိုင်းကစတင်ကာ ကင်းစင်သလောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး ရက် ၁၀၀ ကျော် ပိုးကင်းစင်ခဲ့ကာ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့မှာ အကျဉ်းထောင်သား တစ်ဦးမှာ ကိုဗစ်ပိုး တွေ့ရှိမှုရှိခဲ့တယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ အခြေအနေတွေကို ယှဉ်ထိုးပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို အထွေထွေရောဂါကုသမားတော်ကြီး ဒေါက်တာ မိုးအောင်ကျော်နိုင်က အခုလို ထောက်ပြပါတယ်။
“ဆရာအခုပဲ ဘန်ကောက်မှာနေတဲ့ ဆရာ့သူငယ်ချင်းနဲ့ အဆက်အသွယ်ရတယ်။ ထိုင်းမှာ ဘယ်လိုတွေဆောင်ရွက်သလဲလို့ အဓိကမေးလိုက်တာပေါ့။ သူတို့ဆီမှာတော့ သူက နမူနာတစ်ခုပြောပြတယ်။ သူက ကွန်ဒိုမှာနေတယ်ပေါ့နော်။ သူက အခန်းပြင်ထွက်လာပြီးတော့ အပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာ Mask မေ့လာခဲ့တယ်။ ဓာတ်လှေကားက ဆင်းပြီး သူအပြင်ထွက်တဲ့အချိန် သူ့မှာ Mask မပါလာဘူးဆိုတာနဲ့ သူ့ကို ဘတ် ၅၀၀ (မြန်မာငွေ နှစ်သောင်းကျော်) ဒဏ်ရိုက်တယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် ပါကင်ပိတ်တယ် စသည်အားဖြင့် ဥပဒေအရ အရေးယူတယ်ပေါ့။ ကြီးကြပ်မှုနဲ့ အ‌ရေးယူမှုနဲ့ ဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စတွေကို တိတိကျကျ လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်လို့ သူတို့က အခုချိန်မှာ ကူးစက်မှုနှုန်းလျော့ကျအောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ သူတို့မြင်တယ်ပေါ့” လို့ ထိုင်းနိုင်ငံက အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင်က Duwun ကို ပြောပြပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပထမလှိုင်းအတွင်း ကူးစက်ခံရသူ ၃၀၀၀ ကျော်ထဲမှာ ပြည်တွင်းကူးစက်မှု ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် (၂၄၀၀ ကျော်) ရှိခဲ့တယ်လို့ Office of International Cooperation,DDC MOPH ရဲ့ အချက်အလက်များအရ သိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ပထမအကြိမ် ကူးစက်မှုကို အောင်အောင်မြင်မြင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ နေ့စဉ် ပြည်တွင်းကူးစက်မှုက ပိုးတွေ့လူနာရာနှင့်ချီရှိနေတာ နှစ်ပတ်ကျော်သွားခဲ့ပါပြီ။
“ဆရာလည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ် ဆရာတို့တိုင်းပြည်မှာ ဘာဖြစ်လို့ ပထမအကြိမ် ထိန်းနိုင်ပြီး ဒုတိယအကြိမ် မထိန်းနိုင်လဲ။ ပထမအကြိမ်မှာကတော့ ပိုးသယ်ဆောင်ပြီးတော့ ပြည်ပက ဝင်ရောက်လာသူတွေ၊ နယ်စပ်က ဝင်လာသူတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ နီးစပ်ရာ ကွန်းတက်တွေကို လိုက်လံထိန်းချုပ်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူတို့ဆီကနေတစ်ဆင့် ဆရာတို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုးတွေ မရောက်ရှိအောင် တားဆီးလိုက်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဆရာတို့တိုင်းပြည်မှာ ပထမတစ်ခေါက်မှာ သိပ်မဆိုးသွားဘူး။ ဒုတိယအခေါက်မှာကျတော့ ပြည်တွင်းပြန့်နှံ့မှုကနေ စတယ်။ နေရာအနှံ့ကို ရောက်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အနားကိုရောက်လာတဲ့ ပိုးတွေကို မပြန့်ပွားအောင် Mask တပ်ပါဆိုတဲ့အခါမှာ မက်စ်မတပ်ဘဲနဲ့ သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့သူဆီမှာ ပိုးရှိမှန်းလည်းမသိဘူး။ သွားလာလှုပ်ရှားရင်းနဲ့ သူ့ရဲ့ နီးစပ်ရာ နီးစပ်ရာကို ရန်ကုန်မှာဆိုရင် မြို့နယ် အကုန်လုံးနီးပါးကို ရောက်ရှိသွားတယ်ပေါ့” လို့ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင်က ဆိုပါတယ်။
စောင့်ရှောက်ကုသပေးမှုမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက ကွာခြားမှုသိပ်မရှိပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အဓိက အားနည်းတဲ့အချက်တွေက (၁) စည်းကမ်လိုက်နာမှုမရှိကြလို့ (၂) စည်းကမ်းမလိုက်နာတဲ့သူတွေကို ကြီးကြပ်အရေးယူမှု အားနည်းလို့ ဒီနှစ်ချက်ကြောင့်မို့လို့ ပြန့်နှံ့မှု များနေရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင်က သုံးသပ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့အထိ အတည်ပြုလူနာ ၃၄၉၀ ဦးရှိပြီး သေဆုံးသူ ၅၈ ဦးရှိပါတယ်။ လူနာ ၃၃၂၅ ဦးက ပြန်လည်သက်သာကောင်းမွန်သွားပြီဖြစ်လို့ ကုသဆဲလူနာက ၁၀၇ ဦးသာ ရှိပါတော့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိ အတည်ပြူလူနာ ၃၈၉၄ ဦး၊ သေဆုံးလူနာ ၄၆ ဦးရှိကာ ပြန်လည်ကောင်းမွန်သူ ၉၀၈ ဦးရှိပြီး ကုသဆဲလူနာက ၂၉၄၀ ရှိနေပါတယ်။
ထိုငျးနိုငျငံမှာ ပွညျတှငျးကူးစကျမှုက မလေနှောငျးပိုငျးကစပွီး မရှိသလောကျ ဖွဈသှားပါပွီ။ ဇနျနဝါရီလကစပွီး ကိုဗဈ ၁၉ လူနာသဈတှရှေိ့တဲ့ ထိုငျးနိုငျငံဟာ မလေဆနျးကစတငျပွီး လူနာအရအေတှကျ ၃၀၀၀ ကြျောခဲ့တာာဖွဈပွီး မွနျမာနိုငျငံက သွဂုတျလလယျအထိ အတညျပွုလူနာ ၃၇၀ ကြျောသာ ရှိခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ စကျတငျဘာလလယျမှာ ဆိုရငျတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုဗဈလူနာတှရှေိ့မှုက ထိုငျးနိုငျငံထကျ ကြျောလှနျသှားခဲ့ပွီး စကျတငျဘာလ ၁၇ ရကျနေ့ မနကျပိုငျးအထိ မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုဗဈအတညျပွုလူနာ ၃၈၉၄ ဦးရှိနပွေီး ထိုငျးနိုငျငံမှာ ၃၄၉၀ ဦး ရှိနပေါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံမှာ ပွညျတှငျးကူးစကျမှုက မလေ‌နှောငျးပိုငျးကစတငျကာ ကငျးစငျသလောကျဖွဈသှားခဲ့ပွီး ရကျ ၁၀၀ ကြျော ပိုးကငျးစငျခဲ့ကာ စကျတငျဘာလ ၃ ရကျနမှေ့ာ အကြဥျးထောငျသား တဈဦးမှာ ကိုဗဈပိုး တှရှေိ့မှုရှိခဲ့တယျလို့ ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာန ထုတျပွနျခကျြအရ သိရပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံနဲ့ အိမျနီးခငျြးထိုငျးနိုငျငံတို့ရဲ့ အခွအေနတှေကေို ယှဥျထိုးပွီး မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လိုအပျခကျြတှကေို အထှထှေရေောဂါကုသမားတျောကွီး ဒေါကျတာ မိုးအောငျကြျောနိုငျက အခုလို ထောကျပွပါတယျ။
“ဆရာအခုပဲ ဘနျကောကျမှာနတေဲ့ ဆရာ့သူငယျခငျြးနဲ့ အဆကျအသှယျရတယျ။ ထိုငျးမှာ ဘယျလိုတှဆေောငျရှကျသလဲလို့ အဓိကမေးလိုကျတာပေါ့။ သူတို့ဆီမှာတော့ သူက နမူနာတဈခုပွောပွတယျ။ သူက ကှနျဒိုမှာနတေယျပေါ့နျော။ သူက အခနျးပွငျထှကျလာပွီးတော့ အပွငျထှကျတဲ့အခါမှာ Mask မလေ့ာခဲ့တယျ။ ဓာတျလှကေားက ဆငျးပွီး သူအပွငျထှကျတဲ့အခြိနျ သူ့မှာ Mask မပါလာဘူးဆိုတာနဲ့ သူ့ကို ဘတျ ၅၀၀ (မွနျမာငှေ နှဈသောငျးကြျော) ဒဏျရိုကျတယျ။ ပွီးလို့ရှိရငျ ပါကငျပိတျတယျ စသညျအားဖွငျ့ ဥပဒအေရ အရေးယူတယျပေါ့။ ကွီးကွပျမှုနဲ့ အ‌ရေးယူမှုနဲ့ ဥပဒစေိုးမိုးရေးကိစ်စတှကေို တိတိကကြ လိုကျနာဆောငျရှကျနိုငျလို့ သူတို့က အခုခြိနျမှာ ကူးစကျမှုနှုနျးလြော့ကအြောငျ လုပျပေးနိုငျတယျလို့ သူတို့မွငျတယျပေါ့” လို့ ထိုငျးနိုငျငံက အရေးယူဆောငျရှကျမှုအပိုငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး ဒေါကျတာမိုးအောငျကြျောနိုငျက Duwun ကို ပွောပွပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံမှာ ပထမလှိုငျးအတှငျး ကူးစကျခံရသူ ၃၀၀၀ ကြျောထဲမှာ ပွညျတှငျးကူးစကျမှု ၇၀ ရာခိုငျနှုနျးကြျော (၂၄၀၀ ကြျော) ရှိခဲ့တယျလို့ Office of International Cooperation,DDC MOPH ရဲ့ အခကျြအလကျမြားအရ သိရပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံက ပထမအကွိမျ ကူးစကျမှုကို အောငျအောငျမွငျမွငျထိနျးခြုပျနိုငျခဲ့ပမေဲ့ ဒုတိယအကွိမျမှာတော့ နစေ့ဉျ ပွညျတှငျးကူးစကျမှုက ပိုးတှလေူ့နာရာနှငျ့ခြီရှိနတော နှဈပတျကြျောသှားခဲ့ပါပွီ။
“ဆရာလညျးပွနျစဉျးစားကွညျ့တယျ ဆရာတို့တိုငျးပွညျမှာ ဘာဖွဈလို့ ပထမအကွိမျ ထိနျးနိုငျပွီး ဒုတိယအကွိမျ မထိနျးနိုငျလဲ။ ပထမအကွိမျမှာကတော့ ပိုးသယျဆောငျပွီးတော့ ပွညျပက ဝငျရောကျလာသူတှေ၊ နယျစပျက ဝငျလာသူတှနေဲ့ သူတို့ရဲ့ နီးစပျရာ ကှနျးတကျတှကေို လိုကျလံထိနျးခြုပျနိုငျလိုကျတဲ့အတှကျကွောငျ့ သူတို့ဆီကနတေဈဆငျ့ ဆရာတို့ရဲ့ ပတျဝနျးကငျြကို ပိုးတှေ မရောကျရှိအောငျ တားဆီးလိုကျနိုငျတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ ဆရာတို့တိုငျးပွညျမှာ ပထမတဈခေါကျမှာ သိပျမဆိုးသှားဘူး။ ဒုတိယအခေါကျမှာကတြော့ ပွညျတှငျးပွနျ့နှံ့မှုကနေ စတယျ။ နရောအနှံ့ကို ရောကျတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့အနားကိုရောကျလာတဲ့ ပိုးတှကေို မပွနျ့ပှားအောငျ Mask တပျပါဆိုတဲ့အခါမှာ မကျဈမတပျဘဲနဲ့ သှားလာလှုပျရှားတဲ့သူဆီမှာ ပိုးရှိမှနျးလညျးမသိဘူး။ သှားလာလှုပျရှားရငျးနဲ့ သူ့ရဲ့ နီးစပျရာ နီးစပျရာကို ရနျကုနျမှာဆိုရငျ မွို့နယျ အကုနျလုံးနီးပါးကို ရောကျရှိသှားတယျပေါ့” လို့ ဒေါကျတာမိုးအောငျကြျောနိုငျက ဆိုပါတယျ။
စောငျ့ရှောကျကုသပေးမှုမှာ မွနျမာနိုငျငံနဲ့ ထိုငျးနိုငျငံက ကှာခွားမှုသိပျမရှိပမေဲ့ မွနျမာနိုငျငံက အဓိက အားနညျးတဲ့အခကျြတှကေ (၁) စညျးကမျလိုကျနာမှုမရှိကွလို့ (၂) စညျးကမျးမလိုကျနာတဲ့သူတှကေို ကွီးကွပျအရေးယူမှု အားနညျးလို့ ဒီနှဈခကျြကွောငျ့မို့လို့ ပွနျ့နှံ့မှု မြားနရေခွငျးဖွဈတယျလို့ ဒေါကျတာမိုးအောငျကြျောနိုငျက သုံးသပျပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံမှာ စကျတငျဘာလ ၁၇ ရကျနအေ့ထိ အတညျပွုလူနာ ၃၄၉၀ ဦးရှိပွီး သဆေုံးသူ ၅၈ ဦးရှိပါတယျ။ လူနာ ၃၃၂၅ ဦးက ပွနျလညျသကျသာကောငျးမှနျသှားပွီဖွဈလို့ ကုသဆဲလူနာက ၁၀၇ ဦးသာ ရှိပါတော့တယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ စကျတငျဘာလ ၁၇ ရကျနမေ့နကျပိုငျးအထိ အတညျပွူလူနာ ၃၈၉၄ ဦး၊ သဆေုံးလူနာ ၄၆ ဦးရှိကာ ပွနျလညျကောငျးမှနျသူ ၉၀၈ ဦးရှိပွီး ကုသဆဲလူနာက ၂၉၄၀ ရှိနပေါတယျ။
ဒီလို လုပ်စားနေတဲ့ ရွှေဆိုင်တွေကြောင့် ပညာမတတ်တဲ့ အခြေခံ လူတန်းစားတွေ ခံနေရအုံး မှာပါပဲ
စစ်ကိုင်းတိုင်း ပညာရေးမှူး ရုံးရှေ့ တွင် ပညာရေးဝန်ကြီး အခေါင်းပုံ လာချထား